ပန်ဒိုရာ: Black or White? We are the world!
Michael Jackson ရဲ့ အနုပညာတွေ ဖျော်ဖြေမှုတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အမြဲ နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေမှာ အမှောင်ဘက်ခြမ်း အလင်းဘက်ခြမ်း ရှိမယ်။ အမည်းဘက်ခြမ်း အဖြူဘက်ခြမ်းရှိမယ်။ ချိုတဲ့ဘက် ခါးတဲ့ဘက် ရှိမယ်။ မိုက်ကယ်လ် ရဲ့ လင်းလက်တဲ့ အဖြူရောင်ဘက်ခြမ်းက ချိုမြတဲ့ အနုပညာနဲ့ လူသားဆန်မှုတွေဟာ အခုအချိန်အထိ လူတွေရဲ့နှလုံးသားကို လှုပ်ခတ်နေဆဲပါ။ သူ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ။
အဲဒီသီချင်း သွင်းခဲ့ပုံကို embedded code ပေးမထားဘူး။ ဒီမှာကြည့်ပါ။
Full version က embedded code ပေးမထားဘူး။ ဒီမှာကြည့်ပါ။
(မမျှော်လင့်ပဲ နေမကောင်းဖြစ်လို့ ပန်ဒိုရာတယောက် နားနေပါတယ်။ အင်တာနက် အီးမေးလ် ဂျီတော့ခ် သိပ်မ၀င်ဖြစ်ပါ။ကွန်ပြူတာကို ကြာကြာမကြည့်ပါ။ ပို့စ်အသစ်လည်း ရေးဖြစ်မှာ မဟုတ်သေးပါ။)
Posted by pandora at 10:20 AM
ထပ်တူကြေကွဲရပါတယ်..။ နေကောင်းအောင် နေပါနော်..။
မပန်ရေ အသံတိတ်နေလို့၊ နေကောင်းအောင် နေပါ။
သူ့သတင်းကို ကြားကတည်းက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ အရမ်းတော်တဲ့ အနုပညာ ဘုရင်ပါပဲ။
ပန်ပန်လဲ မြန်မြန်နေကောင်းကျန်းမာ စာပြန်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
အရမ်း နေမကောင်း ဖြစ်နေရင် ဆေးခန်းသွားပြလိုက်ပါ။ ဖလူး အောက်ဘရိတ်က အခု လိုကယ်လိ ထရန်စမစ် ဖြစ်နေတယ်။
သူ့ရဲ့ အနုပညာကတော့ အများကြီးကို ကျန်နေခဲ့မှာပါ အစ်မရယ်.. သူတောက်ပခဲ့တုန်းကလည်း ကမ္ဘာကြီးကို ပေးဆပ်ခဲ့တာပဲကိုး......
သတိလဲထားဦး မိုက်ကယ်တော့သွားပြီ ကျော်ကြားသူ တွေပိုဂရုစိုက်ရတယ် ဟားဟား စတာနော်
သူ့ရဲ့သီချင်းတိုင်းကိုမကြိုက်ပေမဲ့အဲဒီနှစ်ခုရယ် we are the world ရယ်ကိုကြိုက်တယ်...
Get well soon.:)
J0IweJ0g39I ကို တခြား embedded လုပ်လို့ရတဲ့ရှိပြီးသား ကုဒ်တွေနေရာမှာ အစားထိုးလိုက်ရင် ရမယ်ထင်တယ်။ Get well soon.
Heal the world သီချင်းကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။